Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah & Kukiyada
Protestantism iyo qulqulka
Intee in le'eg ayay dawannada kaniisaddu miisaamaan?
Category: Theology 0
Qiimaha Liiska: $7.99 Qiimaha: $6.99 Waxaad Keydisay: $1.00 (13%) Immisa Miisaaman Dawanku? Gambaleelka laga bilaabo 10 ilaa 15 inji dhexroorka culeyskiisu yahay 30 ilaa 75…
Xafladda meherku ma kitaabbaa?
Waa inay muujisaa "calaamadaha bikranimada" (dhiigga go'yaasha subaxda ka dib), laakiin ma jirto shuruud noocaas ah oo ragga ah. 4) Ma jiro xaflad guur...
Waxaad weydiisay: Yaa kaniisaddu ka saartay?
Janaayo 3, 1521, Pope Leo X wuxuu soo saaray dibiga papal Decet Romanum Pontificem, kaas oo ka saaray Martin Luther Kaniisadda Katooliga. Yaa laga saarayaa Katooliga…
Sidee buu Pastor Chris u bilaabay adeeggiisa?
Chris Oyakhilome waxa uu shaqadiisa Kiristaanka bilaabay isaga oo wax ka baranayay Jaamacadda Ambrose Ali University, Ekpoma ee dalka Nigeria ee Edo. Wasaaraddiisu waxay markii hore ku bilaabatay sidii Mu'miniinta 'Loveworld Fellowship waxayna noqon lahayd…
Jawaab degdeg ah: Muxuu Baybalku ka yiri ka helidda caawimaadda kuwa kale?
Baybalku wuxuu sheegayaa in Ilaah jecel yahay kan farxad wax ku bixiya (2 Korintos 9:7) iyo in Ciise baray inay ka wanaagsan tahay in wax la bixiyo markaas la qaato (Falimaha Rasuullada 20:35). … Awood u leh…
Maxaa tusaale u ah diinta madaniga ah?
Tusaalooyinka caqiidada madaniga ah waxay ka muuqanayaan odhaahyada loo adeegsaday cilmi-baadhista sida kuwan soo socda: "Maraykanku waa quruunta Ilaah doortay maanta." … “Fasaxyada sida afraad…
Diintee aan ku deeqin xubnaha?
Markhaatiyaasha Yehowah waxaa badanaa loo qaataa inay ka soo horjeedaan ku-deeqidda sababtoo ah waxay aaminsan yihiin ka-soo-kabashada dhiigga. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ka dhigan tahay oo kaliya in dhammaan dhiigga laga saaro ...
Waa maxay muhiimada uu Baybalku u leeyahay noloshayda?
Qorniinku wuxuu ina siinayaa xalalka xaalad kasta oo nolosha ah. Halka Erayga Ilaahay uu ina barayo inaan jeclaano xataa cadaawayaashayada, wuxuu sidoo kale nooga digayaa inaan...
Jawaab degdeg ah: Sidee ayay diintu u keentaa isku dhac bulsho?
Xagjiriinta diinta ayaa inta badan ku tilmaama falalkooda inay yihiin kuwo ka badbaadinaya adduunka kooxaha sharka leh. Dadka diinta u isticmaala inay abuuraan khilaafaad waxay si fudud u badiyaan aaminsanaanta naftooda…
Jawaab degdeg ah: Sidee bay bani-aadmigu gacan uga geysteen daciifinta Kaniisadda Katooliga?
Sidee bay bini'aadantinimada Renaissance gacan uga geysteen daciifinta Kaniisadda Katooliga Roomaanka? Waxay rumaysnaayeen fikirka xorta ah waxayna su'aal geliyeen caqiido badan oo la aqbalay. … Iibinta iyo iibsashada…
1 2 ... 1,900 Next
Ku saabsan qoraaga.
Hello, magacaygu waa Colleen. In my blog, waxaan ka hadlayaa jihada noocan oo kale ah Masiixiyadda sida Brotestanism iyo wadarta kaniisadaha madax-bannaan ee ay ka kooban tahay.
Xaggee bay Baybalka kaga qoran tahay in Ciise yahay Wiilka Ilaah?
Magacee ayaan ku baabtiisaa?
Su'aal: Muxuu Lewi uga jeedaa Baybalka?
Waa maxay doorka Ruuxa Quduuska ah ee nolosha iyo howlgalka kaniisadda?
Jawaabta ugu wanagsan: Halkee bay dahabka oo dhami ka yimaadeen Baybalka?
Immisa nooc oo Kitaabka Quduuska ah ee KJV ayaa jira?
Nunyadu ma noqon karaan Kaniisadda Ingiriiska?
© 2022 Guriga Salaadda
Nala Xiriir | Nagu saabsan | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah & Kukiyada
U fiirsashada kuwa xaqa u leh! Dhammaan agabka lagu dhejiyay goobta waxaa si adag loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad iyo waxbarasho! Haddii aad u malaynayso in dhejinta shay kastaa ay ku xad-gudbaynayso xuquuqdaada daabacaada, hubi inaad nagala soo xidhiidho foomka xidhiidhka oo alaabtaada waa laga saari doonaa!